> Resource> Video> Download YouTube ka Dropbox Play On iPad / iPhone / Android
Ị na-eji Dropbox na-egwu vidiyo na iPad, iPhone ma ọ bụ Android ntị? Ọ bụrụ na ee, ọ bụ mma ka ị chọta a ezi ụzọ ibudata YouTube ka Dropbox ka na-ekiri YouTube videos mgbe e mesịrị n'ụlọ gị oge ntụrụndụ, ebe ọ bụghị onye ọ bụla nwere mapụtara oge na-anọdụ ala n'ihu kọmputa na-ekiri YouTube videos site ná mmalite ruo ọgwụgwụ. Ugbu a, ka anyị hụ ndị nkuzi n'okpuru.
1 Download YouTube ka Dropbox
Ebe ọ bụ na ọ dịghị ihe kpọmkwem ụzọ na-etinye YouTube ka Dropbox, m aro bụ ibudata YouTube na kọmputa wee bulite ya Dropbox. Iji mee otú ahụ, ihe ị chọrọ bụ naanị a YouTube Downloader, dị ka AllMyTube nke nwere ike ibudata na tọghata YouTube ka ngwaọrụ-enyi na enyi usoro (MP4 ma ọ bụ MOV na-atụ aro).
Mgbe ị na-emeghe YouTube videos na-egwu, i nwere ike pịa Download button n'elu nri-esi na ha ebudatara. Mgbe ahụ a tọghata bọtịnụ na nri nke vidiyo na ebudatara n'ọbá akwụkwọ. Pịa na ya ma họrọ MOV ma ọ bụ MP4 dị ka mmepụta usoro.
O doro anya na Dropbox na-achọrọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ a ọhụrụ Dropbox akaụntụ, aha ebe a.
Na-ebugote faịlụ ka Dropbox bụ damnly mfe. Dị pịa 'Bulite' button mgbe ị nbanye gị Dropbox akaụntụ na aha njirimara na paswọọdụ, mgbe ahụ, na-eso na ihuenyo ntụziaka iji nweta ya mere.
2 Play YouTube si Dropbox maka iPad / iPhone / Android
Otu n'ime Dropbox si uru bụ na mma na ị nwere ike ịnweta gị uploaded faịlụ n'ebe ọ bụla dị ka ogologo oge dị ka i nwere na njikọ Ịntanetị. Lee, m na-iPad ihe atụ na-egosi gị otú ị na-egwu YouTube video si Dropbox na mobile ngwaọrụ. Wezụga iPad, iPhone, Android na Blackberry ngwa ndị dịnụ. Mụtakwuo.
Mgbe Dropbox maka iPad arụnyere, nbanye na i nwere ike ịhụ gị niile Dropbox faịlụ na n'aka ekpe. Enweta a YouTube video na na na aka nri n'akụkụ. See akụ n'elu ịbanye ihuenyo zuru mode.
3 Play YouTube si Dropbox-anọghị n'ịntanetị
Nke a bụ n'ezie nhọrọ na-ahapụ ị na-egwu YouTube videos n'ebe ọ bụla - ibudata na-anọghị n'ịntanetị version nke YouTube video nke Dropbox ngwaọrụ gị. Iji mee otú ahụ, enweta na 'kpakpando' button na n'elu nri akuku mgbe i nwere na njikọ Ịntanetị. Jide n'aka na nbudata usoro bụ zuru ezu na Favorite taabụ. Site Dropbox taabụ, ị ga-ahụ na-anọghị n'ịntanetị YouTube vidiyo na a circled kpakpando akara ngosi. Wee pịa ya na-egwu YouTube video offline si Dropbox. Dị nnọọ nwere fun!
Movie Onye kere maka Kids: akụzi Kids Mee a Movie
DivX joiner: jikota Ọtụtụ DivX Files n'ime otu